DVD ပြီးတော့ လာပြန်ပြီ EVD တဲ့ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > သုတစွယ်စုံ > သတင်းပဒေသာ > အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့အခြေအနေ > DVD ပြီးတော့ လာပြန်ပြီ EVD တဲ့
View Full Version : DVD ပြီးတော့ လာပြန်ပြီ EVD တဲ့
ကျွန်တော် ဟိုတစ်နေ့ကမှ သိလိုက်တဲ့ နည်းပညာအသစ်လေးပါ။။
ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ အခွေတွေပါ..CD, DVD အင်း အခုတော့
EVD တဲ့ဗျာ..EVD ဆိုတာကတော့ Enhanced Versatile Disc ရဲ့အတိုကောက်ပါ။
The Enhanced Versatile Disc (EVD) is an optical medium-based digital audio/video format, developed to provideameans for playing HDTV content using existing optical media. It was announced on November 18, 2003 by China&#039;s Xinhua News Agency asaresponse to the popular DVD-Video format and its licensing costs (which some considered excessive). It uses an optical storage medium in CD size (120 mm) that is physicallyaDVD disc with the same UDF file system. China started development on EVD in 1999, because DVD Video (CSS, Macrovision, etc.) and MPEG-2 (Video and Systems) licensing costs were relatively high — reportedly in the range of $13–$20 USD per hardware video player.
ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်ကိုလည်း အပြင်ကလူတစ်ယောက်လာမေးတယ် ...... အဲဒါဘာလဲတဲ့ ... ကျွန်တော်ကတော့ပြောလိုက်တယ် ... နာမည်ပြောင်းထား တာနေမှာပေါ့လို့ ...... အဲလိုလဲမသိလိုလေ Mp4 ကိုတောင် တရုတ်က MP5 ဆိုပြီး ညာရောင်းတာကို .....
ကျွန်တော်အထင်နော် EVD ဆိုတာ format လေးပြောင်းပြီးထားတာနဲ့တူတယ် ...
ကျွန်တော်တို့ PowerDVD နဲ့ကြည့်တာနဲ့ window media နဲ့ကြည့်တာ နည်းနည်းကွာသလိုပဲနေမှာပါဗျာ
နောက်ကျရင် FVD တို. GVD တို.ပါထပ်ပြီးပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ
vcd တောင်ခုထိဘော်ဒါတွေစိကငှားငှားကြည်.နေရတာပါ ;D ;D ;D
အင်း ရေးထားတာလဲ နည်းနည်းကြာနေပြီ၊ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်က ဒီဖိုရမ်ကို အခုမှ ရောက်ခါစပဲရှိသေးတော့ ဒီနေ့မှ ဒီတော့ပစ်ကို တွေ့မိပါတယ်။
အပေါ်မှာ ရေးထားသလို (The Enhanced Versatile Disc (EVD) is an optical medium-based digital audio/video format........) ပေါ့ဗျာ အဲဒါ သူတို့ပြောတာပေါ့နော်၊ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကလိတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တော့ကာ သူ မူရင်း EVD စက်မှာ ပါလာတဲ့ EVD disc ကို အိမ်က ကွန်ပျူတာလေးထဲထည့်၊ ဖွင့်ကြည့်တော့ *.sam ဆိုတဲ့ file လေးတွေ တွေ့ပါလေရော၊ ဘယ်ရမလဲ တွေ့သမျှ media Player တွေနဲ့လိုက်ဖွင့်၊ wmp player, power dvd ဟင် ဖွင့်လို့လဲရဘူး။ ရှုပ်ပါတယ် imtoo နဲ့ Mp3 ကောက်ပြောင်းလိုက်တယ်။ ရတယ်ဟ၊ (အင်း EVD ဆိုတာ အင်ကြီးနဲ့တူတယ်။) ဒါနဲ့ imtoo ရဲ့ file information မှာကြည့်လိုက်တော့,
video Encoding mpeg4
frame size 352x288, 640x480,720x540
bit rate 1000kbps, 1500kbps, 2000kbps
အင်း အဲဒီလောက်ဆိုရင် ဖိုရမ် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ ဟာ EVD ဆိုတဲ့ နည်းပညာ အသစ်ဆိုတာကြီးကို သဘောပေါက်နိုင်ကြပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
တစ်ကယ်တော့ EVD ဆိုတာ-------
နားလည်သွားပါပြီ ပြီးတော့ ကျွန်တော်မေးချင်တာလေးတွေရှိသေးတယ်
EVD မှာတစ်ချို့ အသံ စနစ်တွေကို အစားထိုးထားတာတွေ့ ရတယ် ဥပမာ မြန်မာလို့ ပြောလာတဲ့ အသံတွေလေ ခွေဖတ်နေသည်တို့ ဘာတို့ 
အဲ့ဒါတွေက Choice လုပ်လို့ ရတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေလား ကွန်ပျူတာနဲ့ စပ်ပြီးပြုပြင်လို့ ရတယ်လား
ရရင် ဆော့ဝဲလေးပါညွှန်းပေးနော် အိမ်ကလူတွေကို ကျွန်တော့်အသံနဲ့ လုပ်ပေးချင်လို့:4: :4: :4: :4: :4:
အဟီး အဲဒါတော့ ကျွန်တော်လဲမသိဘူးဗျ၊ :O :O :O တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ အဲဒီလို အသံတွေ၊ မြန်မာစာတမ်းထိုးတာတွေ (အခွေဖတ်သည်။ နောက်တစ်ပုဒ်၊ ဖွင့်သည်၊ ရောက်လေရာတွင်ပြသခြင်း....) အဲဒါတွေကို ပြင်ရေးချင်ရင် firmware (EVD ရဲ့ os) writer (EEPROM programmer)လိုလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီ firmware ကို edit လုပ်လို့ရတဲ့ firmware editor software လည်းလိုပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေရှိရင်တော့ လုပ်လို့ ရမှာပါ၊ လုပ်ပြီးရင်းလည်း ဒီဖိုရမ်ကနေ ကျွန်တော့်ကို မျှပေးဦးနော်။ :P :P :P
ps အပေါ်က post ရဲ့ ဆိုလိုရင်းက EVD Format ဆိုတာ Divx or Xvid Format ကိုပဲ etension (*.avi မှ *.evd, *.sam, *.tts, *...., ) ပဲ လို့ပြောင်းထားတာကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။ firmware ကိုသာ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲပြီး format အသစ် ထုတ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါလို့ ရည်ရွယ်ရင်းပါ။